कतारमा नयाँ नियम, करार अबधी पूरा नगरी स्वदेश फर्किन पाउने - Everest Dainik - News from Nepal
कतारमा नयाँ नियम, करार अबधी पूरा नगरी स्वदेश फर्किन पाउने
दोहा,भदौ २१ । कतारमा कार्यरत आप्रवासी कामदारले अब आफ्नो करार अवधी पुरा नभए पनि रोजगारदाताको अनुमतिबिना नै स्वदेश फर्किन पाउने भएका छन् ।
मंगलबार कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अलथानीले ‘एक्जिट पेपर’सम्बन्धी कानुनलाई प्रमाणित गरेसँगै अब स्वदेश फर्किन रोजगारदाताको अनुमति लिनुपर्ने नियम खारेज भएको छ ।
विशेषगरी खाडिका देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जादा निश्चिति करार अवधीपूरा नगरी स्वदेश फर्कन नपाउने नियम रहेको भयपनि अब कतारमा भने त्यस्तो नियम लागू नहुने भएको छ । यसअघि सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि स्वदेश फर्किन रोजगारदाताको अनुमति अनिवार्य थियो । तर नयाँ नियमअनुसार रोजगादारदाताले अब कामदारलाई रोक्न पाउने छैनन् ।
याे पनि पढ्नुस युएईमा पनि मनाइयो दसैं, मुस्लिमलेसमेत टीका लगाए
रोजगारदाताले कामको प्रकृति हेरी झन्डै ५ प्रतिशत कामदारका लागि भने कम्पनीबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ चाहिने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसका लागि रोजगारदाताले श्रम मन्त्रालयलाई नामसहित उचित कारण पेस गर्नुपर्नेछ ।
कतारले सन् २०१७ जनवरी १ गतेदेखि कफला प्रणालीलाई सुधार गर्दै नयाँ नियम लागू गरेको थियो । त्योबेला कम्पनीको अधिकारमा रहेको ‘एक्जिट परमिट’ कतार सरकारले पनि दिन सक्ने गरी नियम बनाएको थियो।
यस्तो छ नयाँ नियमअनुसार स्वदेश फर्किने प्रक्रिया
याे पनि पढ्नुस युएई नेपाल र नेपाली कामदारको पक्षमा छ - मानव संशाधन मन्त्री ,हाम्ली
१. आपतकालीन समस्या आइपरेमा वा वार्षिक विदाका लागि आफ्नो सम्झौताअनुसार निवेदन दिन सकिन्छ।
२. धेरैजसो रोजगारदाताले अनुमति नदिने गरेको र आफ्नो हकमा पनि त्यसै भएमा ‘एक्जिट परमिट’ कमिटीमा गएर निवेदन दिन सकिने छ ।
३. कतारको ‘ई गभरमेन्ट सर्भिस पोग्राम’, ‘गभरमेन्ट सर्भिस् कम्प्लेक्स’ र कतारका जुनसुकै प्रहरी चौकीमा पनि निवेदन दिन सकिने छ ।
४. निवेदन प्राप्त भएको ७२ घण्टाभित्रमा नै समस्याको सुनुवाई हुनेछ । सम्झौता सकिनुअघि नै कतार छाड्न चाहेमा अब कतारको गृह मन्त्रालयलाई राजीनामा दिनुको कारणसहति निवेदन दिनु पर्नेछ । गृह मन्त्रालयले अनुमति दिएपछि सम्झौता सकिनुअघि नै पनि स्वदेश फर्किने अनुमति पाइनेछ ।
याे पनि पढ्नुस कतारमा नेपाली कामदारले पाए साढे ४ लाख पुरस्कार
नयाँ नियमले घरेलु कामदारलाई भने सहयोग नगर्ने भएको छ । घरेलु कामदार कानुनभन्दा बाहिर भएको भन्दै श्रम नियममा आएको सुधारले उनीहरुलाई सहयोग नगर्ने कतारले जनाएको छ ।
नेपाली दूतावास कतारका अनुसार हाल कतारमा ४ लाख भन्दा धेरै नेपाली कार्यरत रहेका छन भने सरकारले ल्यायको नयाँ नियमले लामो समयसम्म घर फर्किन नपाएका नेपालीलाई धेरै सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।